Firefox 66.0.3 inosvika kugadzirisa matambudziko nemamwe maapplication | Linux Vakapindwa muropa
Ivo havana kuita ruzha rukuru, asi zvaive zvisina basa kana: Mozilla yakaburitsa Firefox 66.0.3, kuburitswa kwekuchengetedza uko kusingasanganisi anopfuura mashanu madiki ekugadzirisa. Iyo v5 yeiyo gava browser yakasvika kumahofisi epamutemo nekusvetuka v66.0.2, vhezheni yaisanganisira mashoma ekuchengetedza kusagadzikana kwavakawana mazuva apfuura. Zvakatora nguva yakati rebei, asi yechipiri yekugadzirisa update yeFirefox 66.0.1 zvakare yaisanganisira kuenderana kwewebhu. Zviripachena kuti vamwe vaive vachiri kusiiwa mumugodhi weinki.
Kunge v66.0.2, zvinoita kunge v66.0.3 yauya yakananga kumahofisi epamutemoSaka chero munhu anoshandisa Firefox pane yavo Linux kugovera anogona kugadzirisa ipapo ipapo. Izvo hazvikurumidze, kunze kwekunge iwe uri kusangana nezvinetso zvekuenderana mune mamwe mawebhu webhu. Mune yangu kesi, v66.0.2 yakamoneredza zvinongedzo mumanotsi paICloud.com, uye iyo vhezheni yakaburitswa nhasi haina kuita kuti vashande zvakare.
Chii Chitsva muFirefox 66.0.3
Sezvatinoverenga mune yayo peji yepamutemo, Firefox 66.0.3 inosanganisira shanduko idzi:
Iyo kero bar pane mahwendefa anomhanya Windows 10 ikozvino inoita nemazvo.
Kugadziridza kwekuita mune mimwe mitambo yeHTML5.
Yakagadziriswa bhagi ine Keypress zviitiko muBMM makore ekushandisa.
Yakagadzirisa nyaya ine Keypress zviitiko muMicrosoft gore kunyorera.
Yakagadziridzwa Baidu yekutsvaga plugin.
Sezvauri kuona, hachisi chinhu chakakosha kwazvo kuburitswa, asi zvinongotora kugadziriswa kwechimwe chinhu chatinotarisira kuti iyo yekuvandudza ive yakakosha kwatiri. Se data yandinowana inonakidza, iyo vhezheni inowanikwa muSyappy Store yakafanana, saka zvinoita sekunge Mozilla iri kutotora bhurawuza rayo Snap zvakanyanya zvakanyanya (ngatirovei huni).
Isu tinorangarira kuti Firefox 66 yaisanganisira nhau senge ichivharira otoplay yezvinyorwa zvemidhiya kana kudzokorora kwekushandisa kwemaitiro. Tichifunga nezveramangwana, Firefox 67 inosanganisira kunyangwe chengetedzo uye ichatibvumidza kuisa inopfuura imwechete chiitiko cheakakurumbira browser.
Iwe uri mumwe wevaya vachatora mukana weiyi diki Firefox yekuvandudza?
Firefox 66.0.2 inosvika kugadzirisa zvakasiyana siyana zvewebhu
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux software » Firefox 66.0.3 inosvika kugadzirisa matambudziko nemamwe makore maapp
Vanopomera Google nezvekushatisa browser reFirefox